यो एप्पल वाच पट्टा धावकहरु को लागी छ म म्याकबाट हुँ
एप्पल वाच एक यस्तो उपकरण हो जुन यस विचारको साथ जन्मेको थियो कि त्यसको प्रयोगकर्ताहरू आईफोनमा लगातार हेरिरहनुपर्दैन। समयको साथ यो हृदयको ताल विश्लेषण गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ। सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको कार्यहरू मध्ये एकमा यस घडीको लागि हो को मेट्रिक्स धावकहरू। जे होस्, सबैभन्दा ठूलो कमजोरी मध्ये एक रेसको बीचमा पर्दामा डाटा हेर्न सक्षम भइरहेको छ।
रनरहरूसँग अब एप्पल वाचमा सजिलो व्यायाम र डाटा अवलोकनका लागि उपयुक्त पट्टा छ
एप्पल वाचले रनरहरूको लागि धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ जुन व्यायाम गर्दा धेरै मापनको आवश्यक पर्दैन। तर यसको एक कमजोरी हो तपाईंको स्क्रीन मार्फत डाटा पढ्दैखास गरी नाडी र गति। तर एजगियर कम्पनीले एउटा पट्टि बनाएको छ जुन यस विशेषताको समाधान गर्दछ।
घडी राख्छ औंठाको आधार नजिक, नाडीको बीचमा होईन। यस तरिकाले हामीसँग जोगिन सक्छौं आफ्नो हात उठाउनु भन्दा यो आफ्नो आँखा तिर मोड। यद्यपि यो ज्यादै थकाउने कुरा होइन, जब तपाईं धेरै किलोमिटर बोक्नुहुन्छ, कुनै पनि अतिरिक्त इशारा वास्तविक प्रयास हो।
पट्टा स्पोर्टी एप्पल वाच जस्ता सामग्रीबाट बनेको छ र धातु भागहरू डाइ-कास्ट जस्ताबाट बनेका छन्। पट्टिलाई नाडीमा समायोजित गरिएको छ र घडि औंलाको आधारमा स्थिर गरिएको छ, मुटुको धडकन विश्लेषण गर्दछ त्यतिबेलाका मांसपेशी समूहको माध्यमबाट। यस तरीकाले यो सधै आँखा तर्फ केन्द्रित हुन्छ र वाचिय डाटा पढ्न सजिलो हुन्छ। यो नयाँ विकल्प त्यसपछि दुई पट्टि हुन्छ। नाडीको लागि जुन धेरै समायोज्य र हवेशीर छ र अर्को औंठीको लागि। पछिल्लो दुई आकारमा सबै उपयोगकर्ताहरूमा फिट आउँदछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल उत्पादनहरू » Apple Watch » यो एप्पल वाच पट्टा धावकहरूको लागि हो
के तपाईंलाई थाहा छ यो राम्रो हुन्छ?
पट्टिको लागि लिंक, वा कम्तिमा नाम राख्नुहोस् ताकि हामी यसलाई गुगलमा खोज्न सक्दछौं ...
मैले निर्माताको नाम फेला पार्न यसलाई २ पटक पढ्नुपर्‍यो र त्यहाँबाट तान्न सक्षम हुन ...
Dwarf लाई जवाफ दिनुहोस्